टेबल खेलहरू | ब्ल्याकजेक, ब्याकार्ट, पोकर | Graton क्यासिनो र रिसोर्ट
हामी टेबुलमा उत्साह ल्याउँदछौं!
कुनै पनि खाडी क्षेत्र क्यासिनो भन्दा १०० भन्दा बढी टेबल टेबुल गेम र अधिक लिंक्ड प्रोग्रेसिभको साथ Graton रिसोर्ट र क्यासिनोमा क्यासिनो गेमि action कार्यमा जानुहोस्। ब्याकर्रेट, ब्ल्याकजेक, पाई Gow पोकर, परम टेक्सास होल्डम र अधिक सहित तपाइँको मनपर्ने खेल को एक विस्तृत श्रृंखला को साथ कार्य मा सम्झौता प्राप्त गर्नुहोस्। हामी पनि एक संयुक्त राज्य को सब भन्दा मनमोहक र आरामदायक उच्च सीमा कोठा को प्रस्ताव, साथै धेरै निजी खेल सैलून।
मिस्ट्री कार्ड रूले ™ एलिट
रूलेट अमेरिकामा सबैभन्दा लोकप्रिय टेबल गेमहरू मध्ये एक हो। यो सिक्न सजिलो छ र खेल्न र जित्ने धेरै तरिकाहरू छन्। हाम्रो अत्याधुनिक एलईडी रूलेट तालिकाहरू हेर्नुहोस् र आफ्नो भाग्य प्रयास गर्नुहोस्।
केहि सब भन्दा राम्रो अनौठोको साथ सिक्न को लागी सब भन्दा सजिलो खेल मध्ये एक, ब्याकार्टको उद्देश्य कुन दुई हात मध्ये बैंकर वा खेलाडी को - the को नजिक आउनेछ भविष्यवाणी गर्नु हो।
ड्र्यागन बोनस ब्याकार्ट साइड शर्त भुक्तान गर्दछ जब तपाईंको हात एक प्राकृतिक विजेता हो, वा जब यो ठूलो मार्जिनले जित्छ। सब भन्दा बढि भुक्तान (to० देखि १) एक गैर-प्राकृतिकको लागि हो जुन नौ अंकले जित्छ।
ड्र्यागन बोनस कमीशन नि: शुल्क
हामी पनि एक आयोग फ्रि ड्र्यागन बोनस Baccarat खेल को फरक प्रदान गर्दछ। यस संस्करणमा बैंक ब्याजर्सहरू धक्का दिन्छन् जब घरको बैंकको हातमा तीन कार्ड सात हुन्छ।
गोल्डन फ्रुग कमीशन फ्रि ब्याक्र्याट जस्ता खेल्छ, यसमा बाहेक यसले लोकप्रिय साइड बेट्स "जिन चान 7" लाई प्रस्तुत गर्दछ जसले बैंकको हातमा cards वटा कार्डमा जीत भएको बेला ब्याड्स भुक्तान गर्दछ र "कोइ” "जसले प्लेयर हात is छ भने बाधा पुर्‍याउँछ। तीन कार्ड र जीत मा।
रोयल Bac ब्याकार्ट प्रगतिशील
खेलाडीहरू परम्परागत ब्याकरेट wagers मा दांव। थप रूपमा, तिनीहरू वैकल्पिक रोयल9बोनस शर्तमा एक दांडा राख्न सक्छ। डिलरले त्यसपछि वैकल्पिक बाजी व्यवस्थित गर्नुभन्दा पहिले, पारंपरिक ब्याक्र्याट वेजहरू सम्झौता र समाधान गर्नेछ। यदि कुनै खेलाडीले रोयल posted पोस्ट गरिएको हात बनाएका छन भने उनीहरूलाई भुक्तानी दिइनेछ।
ब्ल्याकजेकले खेलाडीलाई डिलर बिरूद्ध खेल्न बोलाउँछ। प्रत्येक खेलाडीसँग दुईवटा कार्डहरू हुन्छन्। डिलरलाई दुई कार्ड पनि दिइन्छ, एउटा अनुहार माथि र एक अनुहार तल। खेलाडीको हातको विन्दु मानले डिलरको हात २१ लाई न पारेर हराउनु पर्छ। यदि तपाईं २१ भन्दा माथि जानुहुन्छ, वा "बस्ट", घर जित्छ। कार्डहरूले तिनीहरूको संख्यात्मक मान लिन्छ, फेस कार्ड बाहेक, जुन प्रत्येक गणना १० र एसेस १ वा ११ गणना गर्न सकिन्छ।
बस्टर ब्ल्याकजेक साइड शर्तले डिलरको पर्दामा हातमा कार्डहरूको संख्याको आधारमा खेलाडीहरूलाई जित्न अनुमति दिन्छ। २०० देखि १ सम्म जित्नुहोस्। क्वालिफाइका लागि, खेलाडीहरूले उनीहरूको बस्टर ब्ल्याकजेक ब्याट्रीमा १टीपी २ टी more वा अधिक लगाउनु पर्छ र ब्ल्याकजेक हुनुपर्दछ, जबकि डिलरको हातले or वा बढी कार्डहरू बस्ट गर्नुपर्नेछ।
सुपर Prog प्रगतिशील ब्ल्याकजेक
खेलाडीहरूले दुईवटा कार्ड डिलरको दुई कार्डसँग मिलेर एक चार-कार्ड पोकर हात बनाउनका लागि। यदि डिलर एक Ace-up देखाउँदछ, सबै सुपर4wagers जीत। यदि डिलरसँग ब्ल्याकजेक छ भने, सुपर Bon बोनसले बाधा पार्नेछ। रोयल फ्लसले सूटमा भर पर्दै FOUR ज्याकपोट लाइनहरु मध्ये एक भुक्तान गर्दछ। FIFTH ज्याकपट लाइन $200 द्वारा हिट हुनु पर्छ र अनियमित रूपमा सम्मानित छ।
केवल नियमित ब्ल्याकजेकको रूपमा खेल्दछ, तर,, १० वा ११ मा डबल-डाउनहरू र सबै स्प्लिटहरू नि: शुल्क छन्। यो सहि छ, घरले पैसा राख्छ र यदि तपाइँ जित्न सक्नुहुन्छ, तपाइँले यसलाई राख्नुहुन्छ! जब डिलरले २२ तान्छ - सबै हातले धक्का दिन्छ। केवल $1 को लागी २२ बिरूद्ध तपाईंको शर्त बीमा गर्नुहोस्
कालोज्याक खेल्नको लागि एक रोमान्चक तरिका जसले खेलाडीहरूलाई उनीहरूको उत्तम ब्ल्याकजेक हात बनाउनका लागि तिनीहरूका कार्डहरूको अर्डर "स्विच" गर्न अनुमति दिन्छ।
भाग्यशाली भाग्यशाली हाम्रो सबैभन्दा लोकप्रिय ब्ल्याकजेक साइड शर्त छ, यसको उच्च हिट फ्रिक्वेन्सीको कारण। यदि खेलाडीको पहिलो दुई कार्ड र डीलरको अप कार्ड १,, २० वा २१ बराबर हुन्छ भने यसले ब्याज भुक्तान गर्दछ। २०० भन्दा १ सम्म जीत।
पोकरमा रहेको यो रमाइलो मोडले पुरानो चिनियाँ खेल पाई गौ र पोकरको अमेरिकी खेलका तत्वहरू जोड्दछ। पाई Gow पोकर को उद्देश्य दुई राम्रो हात प्राप्त गर्न को लागी हो। खेलाडीहरूले playing२ खेल्ने कार्डहरू र एक जोकरको परम्परागत डेक प्रयोग गर्छन्। जोकर एक Ace को रूपमा वा एक वाईल्ड कार्ड को रूप मा एक सीधा वा फ्लश पूरा गर्न को लागी प्रयोग गर्नु पर्छ।
फेस-अप पाई गा पोकर
डीलरले पहिले आफ्नो हात पर्दा यस पाइ गौ पोकर प्रोग्रेसिभ कमिशन स्वतन्त्र रूपान्तरणमा। यदि डिलरसँग Ace-High Hand (Pai Gow) छ भने, तब सबै हातले स्वचालित रूपमा धक्का दिन्छ। ऐस-हाई साइड शर्तले to० देखि १ सम्म भुक्तान गर्दछ।
भाग्य पाई Gow पोकर प्रगतिशील
यस प्रगतिशील खेलले एक वैकल्पिक बोनस शर्त प्रदान गर्दछ जुन hand कार्डहरू बीच उत्तम हात सम्भव गर्दछ। खेलाडीहरूले तालिका सीमा भित्र कुनै पनि रकम शर्त लगाउन सक्छन्; यद्यपि, कम्तिमा १TP2T5 को एक भाग्य शर्त तपाईंलाई "ईर्ष्या बोनस" भुक्तानीको लागि योग्य बनाउँछ। खेलाडीहरूले ईर्ष्या बोनस जित्न सक्दछन् जब टेबलमा अरू कसैले सिधा फ्लश वा उच्च प्राप्त गर्दछ। त्यहाँ विजयी wagers मा कुनै 5% आयोग छैन। जब डिलर 9-उच्च खेल्छ, तपाईं स्वचालित रूपमा धक्का।
प्रत्येक खेलाडीले तिनीहरूको शर्त राख्छन् डिलरले प्रत्येक खेलाडीलाई आफैलाई तीन कार्ड दिन्छन्। खेलका लागि खेलका दुई मोडहरू छन्: एन्टे र प्ले र पेयर प्लस। एन्टे र प्ले लाई एन्टे सर्कल भित्र एकल शर्त चाहिन्छ। पेयर प्लस शर्त डीलरको हातबाट स्वतन्त्र छ र जोडी प्लस सर्कलमा एकल ब्याट राखेर खेलाइन्छ।
फोर कार्ड पोकरले डिलरको बिरूद्ध हेड-टू-टु-प्ले खेल्दछ र एक प्रगतिशील शर्त जुन एक खेलाडीको अन्तिम हातमा तीन-एक-प्रकारको वा उत्तम समावेश हुँदा जीत हुन्छ। डीलरको बिरूद्ध प्रतिस्पर्धा गर्न, खेलाडीहरूले एन्ट दाना बनाउँदछन् र Aces-up बोनस बाजी पनि बनाउन सक्दछन्। खेलाडीहरूले आफ्नो सर्वश्रेष्ठ चार-कार्ड हात बनाउन पाँच कार्ड प्राप्त गर्दछन्, जबकि डिलरले उसको वा उनको सर्वश्रेष्ठ चार-कार्ड हात बनाउनका लागि छ कार्ड प्राप्त गर्दछ। हामी लोकप्रिय Bad बीट बोनस साइड शर्त पनि प्रदान गर्दछौं।
परम टेक्सास होल्ड 'Em पारंपरिक पोकर जस्तै छ खेलाडीहरू एक अर्काको सट्टामा डिलरको विरुद्ध खेल्दछ बाहेक। त्यहाँ एक वैकल्पिक बोनस ब्याटेर छ कि ब्याडहरू भुक्तान गर्दछ यदि खेलाडीको पाँच-कार्ड हात तीन-एक-प्रकारको (ट्रिप्स) वा राम्रो छ। एन्टे र ब्लाइन्ड दलालहरू डिलरको बिरूद्ध बनेको हुन्छ, तर ट्रिप्स ब्याटेर पोष्ट गरिएको टेबुल बिरूद्ध हो र डिलरको हात होईन। हामी लोकप्रिय Bad बीट बोनस साइड शर्त पनि प्रदान गर्दछौं।